Doorashadii dadbanayd ayaa si toos ah loogu bedelay magacaabis, iyadoo hadda Mushariixinta la rabo oo kaliya ay Xildhibaanno noqonayaan, kala soco Macluumaad xiiso leh Warbixinta Dhacdooyinka Todobaadka ee Keydmedia Online.
28 February 2022: Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roobe, ayaa magacaabay guddi xaqiiqo raadis ah, oo soo darsa xaaladda degaan doorashada 2-aad ee Jubaland, Garbahaarray, taasoo muddo dheer dib u dhac ku imaanayay, sababo la xiriira khilaafaadka Axmed Madoobe iyo Farmaajo.
1 March 2022: Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Laftagareen, ayaa $12 malyan dollar oo uu ka dhacay shacabka uu xukumo ay u taallo Ziraat Bank, oo ku yaalla dalka Turkiga, waxaana uu isku diyaarinayaa inuu iska casilo xilka, si uu ugu tartamo Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya, sida KON ay ogaatey.
2 March 2022: Dowladda Mareykanka ayaa soo saartay digniin cusub oo ku socota shirkadaha diyaaradaha rayidka ah ee ku duulaya hawada waddanka Kenya, si ay uga digtoonaadaan weerarrada suurtagalka ah ee Kooxda Al-Shabaab maleegayan.
3 March 2022: Waraq ka soo baxday Xaafiiska ku-simaha Xeerilaaliyaha guud ee qaranka, Dr. Farxaan Xuseen Maxamed, oo nuqul ka mid ah soo gaaray Warqabadka Keydmedia Online, ayaa loogu yeeray, afar xubnood oo ka tirsan Guddiga Batroolka Soomaaliya kadib markii la saxiixay heshisi shidaalka oo qarsoodi ah oo 7 milyan oo dollar ku baxaya.
4 March 2022: 141 dal, oo Soomaaliya ka mid tahay, ayaa u codeeyay qaraar lagu cambaareyo weerarka Ruushka ee Ukraine, xilli, uu sii kordhayo cadaadiska caalamiga ah ee Moscow, lagu saarayo joojinta colaadda.
5 March 2022: Keydmedia ayaa heshay Macluumaad sheegaya in sababta Farmaajo uu u aaday Qatar ay la xiriirto doorashadda, isagoo raadinaya lacag uu ku iibsado codadka Xildhibaannada cusub. Doha ayaa malaayiin dollar ku bixisay doorashadiisa 2017, taasoo laga dhaxlay dhibaatooyin dib u dhigay dib u dhiska Soomaaliya.
6 March 2022: Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed, Shariif Xassan, ayaa saakay laga hor istaagay in uu u socdaalo magaalada Baydhabo ee xatunka gobolka Bay, xilli uu raadinayo kursi ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka JFS. Muudeey ayaa sidan oo kale bishii hore looga reebay safar uu Baraawe ku tagi lahaa, si kursiga uu ku fadhiyay markale ugu tartamo.
Comments Topics: dhacdooyinka todobaadka ee soomaaliya